Wararka - Taxaddarrada isticmaalka darbiyada bannaanka ka baxsan
Markaad wax ka qabanayso darbiyada bannaanka iyo rarka iyo dejinta gidaarada darbiga dibedda, jihada dhererka darfaha waa in loo adeegsadaa dhinaca walaaca, oo waa in si taxaddar leh loo maareeyaa looxyada si looga fogaado isku dhaca iyo waxyeellada baararka;
Markaad maareyneyso hal xaashi, xaashida waa in loo dhaqaajiyaa si qumman si looga fogaado waxyeellada xaashida.
Dusha sare ee gawaarida macnaheedu waa inuu ahaadaa mid fidsan, iyo darbiyada derbiyada dibedda waa in la hagaajiyaa ka dib markii si xur ah loo raro si looga fogaado wax soo saarka alaabada sababtoo ah isku xirnaanta xad dhaafka ah ee darbiyada dibadda ee derbiga inta lagu jiro hagaajinta;
Yaree gariirka inta lagu jiro gaadiidka si looga hortago isku dhaca iyo roobka.
Deegaanka lagu dhejinayo darbiyada darbiga dibedda waa inay ahaataa mid hawo leh oo qallalan, goobtuna waa inay ahaataa mid fidsan oo adag;
Markaad isticmaaleyso barkimooyinka qoryaha laba jibbaaran, hubi in badeecadu aysan xumaan;
Marka lagu dhejiyo hawada furan, darbiyada derbiga dibedda waa in si buuxda loogu daboolaa maro biyuhu xireen;
Marka la keydinaayo darbiyada banaanka, waa in laga fogeeyaa heerkulka sare iyo meelaha qoyaanka badan, waana inaan lagu dhex darin walxaha wax gubaya sida saliidaha iyo kiimikooyinka.
Markaad fureyso xirmada gidaarka ee bannaanka, waa inaad marka hore dhigtaa sagxad, ka dibna ka furtaa dusha sare ee xirmada alaabta, oo ka soo qaad boodhka dusha sare ilaa hoose;
Ha ka furin qeybta hoose ee derbiga dhinaca si aad uga fogaato xoqitaanka ku yaal guddiga.
Ka dib marka la jaro guddiga darbiga dibedda, faylalka goynta birta waxaa lagu dhejin doonaa dusha sare iyo jeexitaanka guddiga, taas oo sahlan in miridhku dhaco. Wixii soo haray ee birta ah waa in laga saaraa.
Inta lagu jiro dhismaha, dareenka waa in la bixiyaa si loo ilaaliyo dusha sare ee guddiga derbiga dibedda si looga fogaado xagashada iyo saameynta.
Iska ilaali shaqada dhismaha marka roob da'o;
Inta lagu guda jiro howsha dhismaha, ka hortag gudaha darbiyada darbiyada dibadda inay la xiriiraan biyo si looga hortago in biyaha gudaha ay ka soo dusaan dusha sare, taasoo sababi karta xaaluf iyo daxal dusha sare ee guddiga, taasoo yareyneysa nolosheeda adeeg.
Iska ilaali inaad ku isticmaasho heerkulka sare, huurka badan, iyo meelaha ay ka baxaan ashitada (sida qolalka kululeeyaha, qolalka wax lagu gubo, meelaha kulul, waraaqaha, iwm).
Xirmooyinka ka soo baxa darbiga, dhuumaha derbiga hawo-qaboojiyaha ah iyo tuubooyinka isku soo urura, cabirrada u dhigma waa in la dhigaa ka hor inta aan la dhigin saxanka. Ha furin godad ka dib rakibidda saxanka.
Haddii ay jiraan xubno taageeraya qaboojiyeyaasha, hawo-mareennada qiiqa iyo tas-hiilaadka kale ee dusha sare ee derbiga, alxanka korantada iyo hababka kale waa in la qabtaa ka hor inta aan la dhigin darbiyada gidaarka iyo qalabka dahaarka.